Koomishanarri Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummootaa Tarkaanfii Humnoonni Naayijieriyaa Fudhatan Balaaleffatan
Onkoloolessa 22, 2020
Kooshinarri ol’aantuun Koomishina Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummootaa Misheele Baachileet, mootummaan Naayijeeriyaa humna waraanaa gitaa olii, uummata hidhannoo hin qabne magaalaa Leegoos keessatti hiriira ba’etti bobbaasuun miidhaa dhaqqabsiisuu balaaleffatanii jiran.
Hiira kana irratti yoo xiqqaate hiriirtonni 12 ajjeesamuu fi ka biroo hedduun madaa’u gabaase – dhaabatni mirga namoomaa sadarkaa Addunyaa – Amnestii Internaashinaal. Namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasanii ajjeesuun, akka fixinsa murtii seeraatii alaatti ilaalama, jedha – dhaabbatichi.
Koomishinarittiin Koomishina Mirga Dhala-namaa, ka Tokkummaa Mootummootaa – Misheel Baachileet, dhukaasa humnoota mootummaatiin hiriirtota irratti baname sana dura, caasaan kaameraa Televiiziyoonaa fi ibsaan beekaa addaan kutamuu isaa ilaalchisee gabaasaaleen bahan kan isaan yaaddesse tahuu dubbatan. “Kun dhugaa tahuun mirkanoofanaan, haleellaa akkan hamaa itti yaadamee, karoorfamee, qineeffamee namoota nagaadhaan hiriira bahan irratti geggeessame tahuu isaa ti,” jedhan.
Gabaasaa guutuu caqasaa.
Baraak Obaamaan Kutaa Ijoo Taate Penselvaaniyaa Keessatti Baayideniif Duula Filannoo Geggeessan
Prezidaant Trampii fi Itti Aanaa Prezidaantiin Duraanii Baayiden Wal Falmii Xumuraa Geggeessuuf Jiru
Ajjeechaa Humnootiin Naga Eegisisa Hiriirtota Irratti Raawwataniif Haqi Ni Mirkanaa’a: Itti Aanaa Prezidaantii Naayijeeriyaa
Naannoon Itiyoopiyaa Gama Dhiyaa Hoomaa Hawwaannisaa Irraa Qullaa’uun Gabaasame
Muddama Mootumma Federaalaa fi Kan Naannoo Tigraay Hiikuun Itti Gaafatama Komiishina Araaraa Miti: Hojii Geggeessitoota Komiishinichaa